ဆေးရုံကို ဒုတိယ အကြိမ် ပြန်သွားခဲ့ ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းမှန်ကို ပရိသတ်တွေ အတွက် ပြောပြလာတဲ့ ထွန်းကိုကို – Cele Posts
သရုပ်ဆောင် ထွန်းကိုကို ကတော့ သရုပ်ဆောင်ကောင်း သလို ရုပ်ရည်ချောမောရုံ သာမက ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို တစ်ခဲနက်ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ မင်းသား တစ်လက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထွန်းကိုကိုက Covid-19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံ ခဲ့တာကြောင့် ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူ ခဲ့ရပြီး ဒီကနေ့ နိုဝင်ဘာလ (၇) ရက်နေ့ မှာတော့ ဆေးရုံက ပြန်ဆင်းလာ ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထွန်းကိုကိုက ဆေးရုံပေါ်က ဆင်းလျင် ဆင်းချင်းပဲ ဖုန်းဆက်ခေါ်ခဲ့တာကြောင့် ဆေးရုံကို ပြန်သွားခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း ကို စိတ်ပူနေကြတဲ့ သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေ ဆီ အခုလိုပဲ ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။
“မင်း.. ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီလား ? မင်း.. မဲပေးခွင့်ရှိပြီလား ? ဆရာမတွေ က ကျွန်တော့ကို ၁၈ နှစ်မပြည့်သေးဘူး ထင်လို့ ပြန်ခိုင်း လိုက်တာ။ ရုံးပြန်ရောက် တော့မှ ဖုန်းဆက်ပြီး ပြန်လာပါဦးတဲ့။ အခု တော့ ဆေးရုံ မှာ၁၈ ရက်မြောက်တဲ့နေ့ ဆေးရုံကဆင်းပြီး ပြန်ရောက်မှ ဆေးရုံကို ပြန်သွားပြီး မဲပေး လိုက်ရတယ်။ နိုင်ငံသား တစ်ယောက်အနေနဲ့ တာဝန်ကျေသွားပြီ ❤️❤️❤️” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ် စာမျက်နှာမှာ ပြောပြလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ထွန်းကိုကို ကတော့ ဆေးရုံကို ပြန်သွားခဲ့ရတယ် ဆိုတာကြောင့် ဆေးစစ်ချက် အဖြေ မှားယွင်းမှု များဖြစ် သလားလို့ ပရိသတ်တွေက စိတ်ပူ နေကြပေမယ့် ထွန်းကိုကို ကတော့ အကြောင်း အရင်း မှန်ကို ပြောပြလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အားလုံးလည်း သာယာ ပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင် ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်။
ဆေးရုံကို ဒုတိယ အကွိမျ ပွနျသှားခဲ့ ရတဲ့ အကွောငျးအရငျးမှနျကို ပရိသတျတှေ အတှကျ ပွောပွလာတဲ့ ထှနျးကိုကို
သရုပျဆောငျ ထှနျးကိုကို ကတော့ သရုပျဆောငျကောငျး သလို ရုပျရညျခြောမောရုံ သာမက ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကို တဈခဲနကျပိုငျဆိုငျ ထားတဲ့ မငျးသား တဈလကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ထှနျးကိုကိုက Covid-19 ရောဂါပိုးကူးစကျခံ ခဲ့တာကွောငျ့ ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူ ခဲ့ရပွီး ဒီကနေ့ နိုဝငျဘာလ (၇) ရကျနေ့ မှာတော့ ဆေးရုံက ပွနျဆငျးလာ ခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ထှနျးကိုကိုက ဆေးရုံပျေါက ဆငျးလငျြ ဆငျးခငျြးပဲ ဖုနျးဆကျချေါခဲ့တာကွောငျ့ ဆေးရုံကို ပွနျသှားခဲ့ရတဲ့ အကွောငျးအရငျး ကို စိတျပူနကွေတဲ့ သူ့ရဲ့ ပရိသတျတှေ ဆီ အခုလိုပဲ ပွောပွလာခဲ့ပါတယျ။
“မငျး.. ၁၈ နှဈပွညျ့ပွီလား ? မငျး.. မဲပေးခှငျ့ရှိပွီလား ? ဆရာမတှေ က ကြှနျတော့ကို ၁၈ နှဈမပွညျ့သေးဘူး ထငျလို့ ပွနျခိုငျး လိုကျတာ။ ရုံးပွနျရောကျ တော့မှ ဖုနျးဆကျပွီး ပွနျလာပါဦးတဲ့။ အခု တော့ ဆေးရုံ မှာ၁၈ ရကျမွောကျတဲ့နေ့ ဆေးရုံကဆငျးပွီး ပွနျရောကျမှ ဆေးရုံကို ပွနျသှားပွီး မဲပေး လိုကျရတယျ။ နိုငျငံသား တဈယောကျအနနေဲ့ တာဝနျကသြှေားပွီ ❤️❤️❤️” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျ စာမကျြနှာမှာ ပွောပွလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ထှနျးကိုကို ကတော့ ဆေးရုံကို ပွနျသှားခဲ့ရတယျ ဆိုတာကွောငျ့ ဆေးစဈခကျြ အဖွေ မှားယှငျးမှု မြားဖွဈ သလားလို့ ပရိသတျတှကေ စိတျပူ နကွေပမေယျ့ ထှနျးကိုကို ကတော့ အကွောငျး အရငျး မှနျကို ပွောပွလာခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိသတျကွီး အားလုံးလညျး သာယာ ပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျ ပါစလေို့ ဆုတောငျးပေး လိုကျပါတယျ။